Fahad iyo Farmaajo oo mar kale dirsaday Qoorqoor iyo Mursal | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweynaha Koofur galbeed, Lafta-gareen, ayaa todobaadkii hore dib ugu laabtay Baydhabo, kadib markii lagu fashlimay waan-waan ay wadeen isaga iyo Madaxweynaha Galmudug.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka BFS, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa bilaabay waan-waan hor leh si ay xal ugu raadinayaan khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta iyo Madaxweynihii muddadu ka dhamaatay.
Qoorqoor oo Fahad iyo Farmaajo u boobeen kursiga Madaxweynaha Galmudug, si uu uga shaqeeyo danahooda iyo Maxamed Mursal, oo ah masaarta ay Kooxdaasu ku jajabiso sharciga, ayaa u tafa-xeytay in ay Ra’iisul Wasaaraha Soomaliya ka dhaadhciyaan inuu ka gaabsado kiiska Ikraan Tahliil Faarax, si Fahad iyo Kooxdiisu uga badbaadan gacmaha Sharciga.
Guud ahaan khilaafka labada daraf, wuxuu salka ku hayaa Af-duubka Ikraan, Farmaajo tan iyo markii ay arrintaas soo baxday wuxuu si buuxda u caddeeyay go’aankiisa, wuxuuna tallaabo kasta u qaaday is-hor-istaagga cadaaladda.
Dadka u dhuundhuleeda labada xaafiis, ayaa sheegaya in Kooxda Farmaajo, ay isku daygii ugu danbeeyay u xil-saartay Qoorqoor iyo Mursal, si ay RW Rooble, ugu qanciyaan inuu cadaadiska ka yareeyo Fahad.
Siyaasiyiinta iyo dadka u doodaya in u caddaalad helo kiiska Ikraan, ayaa ku doodaya in dhexdhexaadin Siyaasadeed aan looga baahneyn in qeyb ka noqdo Rooble, kaliyana ay tahay in Farmaajo faraha kala baxo howlaha Ra’iisul Wasaaraha isla-markaana Xeerilaalinta CQS, loo daayo maxakamadeynta kooxda uu hoggaamiyo Fahad Yaasiin.
Eedeysane Fahad Yaasiin, ayaa saaka ka soo degay garoonka diyaaradaha Muqdisho, kadib todobaad ay duulimaadyada shacabku diideen in ay dalka ku soo celiyaan.